I-Guggulsterones (guggul) yokulahleka kwesisindo kunye nokwakha umzimba AASraw
I-Guggulsterones (guggul) yokulahleka kwesisindo kunye nokwakha umzimba
/Blog/Guggulsterones/I-Guggulsterones (guggul) yokulahleka kwesisindo kunye nokwakha umzimba
ezaposwa ngomhla 06 / 22 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Guggulsterones.
Yonke into malunga neFosaprepitant Dimeglumine powder
1.Ziziphi i-Guggulsterones (guggul)?
Igama le-2.Guggulsterones (guggul)
3. I-Guggulsterones (guggul) ulwazi lweekhemikhali
4.Iphi i-Guggulsterone (guggul) evela kuyo?
5. UGuggulsterone usebenza njani?
6.Guggulsterones (guggul) yokulahleka kwesisindo
7. I-Guggulsterones (guggul) yokwakha umzimba
I-8.Guggulsterones (guggul) nomphumo kwi-thyroid kunye nehomoni
9. I-Guggulsterones isilinganisi / i-guggul dosage
I-10.Guggulsterones (guggul) isilumkiso
11. Ukusebenzisana kweGuggulsterones (guggul)
12.Kukhuselekile ukusebenzisa iyeza le-Ayurvedic (Guggulsterones)
13. Imiphumo emibi yeGuggulsterones (guggul)
Imibuzo ye-14.Guggulsterones (guggul)
Ividiyo yeGuggulsterone powder
I.Raw Guggulsterone powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: Guggulsterone powder
I-molecular Formula: C21H28O2
1. Yintoni i-Guggulsterones (guggul)?
I-Guggulsterones (guggul), i-CAS No. 95975-55-6, lwenziwa kwintlanzi (igum resin) yomthi we-commiphora mukul, ovela eNdiya. Lo mthi usetyenziswe kwiyeza zakwa-Ayurvedic kangangamakhulu eminyaka, kwaye iicure ze-Ayurvedic ezivela kwi-600 BC zincoma ukuba zithathe unyango lwe-atherosclerosis.
Namhlanje i-guggul resum isetyenziselwa i-arthritis, iyanciphisa i-cholesterol ephezulu, iyanzima kweemithalo (i-atherosclerosis), i-acne nezinye izifo zesikhumba, kunye nokulahleka kwesisindo.
2. Igama leGuggulsterones (guggul)
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Commiphora wightii, Gomme Guggul, Gomme-Resine de Guggul, Guggal, Guggul Gum Resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone, Guggulstérone, Guggulsterones, Guggulstérones, Guglipul, Gugulipid, Gum Guggal, Gum Guggulu, , I-Koushika, i-Mukul Myrrh Tree, i-Palankasha, i-Yogaraj Guggul Gum Resin
I-Guggulsterone (guggul) ngolwazi lweekhemikhali
igama Guggulsterone, guggul, i-Ayurvedic
I-Molecular Formula C21H28O2
Isisindo somzimba 312.45
ukugcinwa Temp 2-8 ° C
umbala Uphuzi ophuzi ophuzi
elide intlawulo WU, MG, BT, T / T
4. Uphi i-Guggulsterone (guggul) evela kuyo?
I-Guggulsterone (guggul) yafunyanwa kuqala kwaye yaphunyezwa kwimithi yamachiza eminyaka edlulileyo kwilizwe lalo lonke laseNdiya. Njengemveliso yendalo yemfuyo, isitshalo se-guggul esivela kumthi we-myrr kwakukholelwa ekuqaleni ukunceda ukuphucula umveliso we-bile kunye nokukhutshwa, kunye nenjongo ejoliswe ekunciphiseni i-cholesterol ye-LDL ngaphakathi kwegazi. Iingxelo eziphikisanayo zivakalisa ukuba ezinye zezi zibango zingabi zichanekile, kwaye ukuba i-guggulsterones ayinakuchaphazeleka kumanqanaba e-cholesterol, nokuba nayiphi na uphando oluqhubekayo luvumelekile, nokuba luphi na imeko.
Ekhulile eIndiya, iGuggul ngumthi okhupha i-sapinous sap from out of the incisions made in its bark. Le resin isetyenziselwe iinkulungwane njengenxalenye yonyango lendabuko yaseNdiya ebizwa ngeAyurveda. Kwilizwe lethu lamanje le-chemistry eliphambili, le ntlawulo ye-sapin ihlanjululwa kwaye ihlanjululwe, kwaye i-standard standard for its constituents-Z and E Guggulsterones (guggulsterones dr oz). Ezi zinto zimbini zintlobo zezityalo zinezinga eliphezulu lezinto eziphilayo kwaye ziboniswe kwizifundo ezichaphazela ezininzi iinkqubo ze-biological kuquka i-thyroid metabolism, i-cholesterol management, kunye ne-dermal (isikhumba). Kwimiba nganye kule ndawo, i-Guggulsterones iboniswe kwizifundo ukuba zibe ngabathungululi abaneempembelelo eziphambili.
I-Guggul (okanye igugulipid) isityalo esisiqhelo sase-Ayurvedic esisetyenziselwa ukuxhasa amazinga e-cholesterol enempilo sele sele ephakathi kwebala eliqhelekileyo. Ukongezelela, isetyenziselwa ukulawula ubunzima. UGuggulsterone usebenza njani?
I-Guggul iqulethe izinto eziphantsi kwe-cholesterol kunye ne-triglycerides. Enye yalezi zinto nayo iyancipha ubomvu nokuvuvukala okwenzeka kwezinye iintlobo ze-acne.
6. I-Guggulsterones (guggul) yokulahleka kwesisindo
I-Guggulsterones yinxalenye esebenzayo ye Aryuvedic intlobo yeCompiphora mukul, eyaziwa ngokuba yi-gugulipids. Izifundo eziliqela ezintsha zibonisa ukuba i-guggulsterones inceda ekulahlekeni kwesisindo.
Kwiirwanyana zokulinga ezilwanyana zondla ukutya okunamafutha aphezulu kwiiveki ze-16. Njengoko kulindeleke, iiliti zavelisa ukwanda kwe-serum glucose, i-cholesterol kunye ne-triglyceride amanqanaba kunye nokwanda kwe-insulin yokunyamekela kakhulu, xa kuthelekiswa nokulawula izilwanyana. Iilwane zondla i-guggulsterones kunye ne-fat fat diet zibonise kakhulu ishukela legazi kunye nokutshiswa kwe-fatabolism. Ukongezelela, i-guggulsterones idibene ngqo kunye neeseli ezinamafutha ezithintelo, zibavimbela ukuba babe ngama-cell storage cells. Abaphandi baphetha ukuba
"I-guggulsterone inesibini ye-hypoglycemic kunye nefuthe le-hypolipidemic elingasinceda ukuphilisa uhlobo lwesi-2 lweswekile."
Olunye uphando lweseli luqinisekisile imiphumo ye-guggulsterone kwiiseli ze-fat1. Kwaboniswa ukuba i-guggulsterones inciphisa inani lamatye e-othelileyo avuthiweyo, unciphise ukugcinwa kwamafutha kumaseli athile avuthiweyo. Ezi ziphumo zibonisa ukuba i-guggulsterones ikhuthaza abantu abanefuthe lokutshisa i-metabolism, ukukhusela ukuqokelela kwamafutha.
Ukwakha umzimba, ukuba ngumdlalo we-aesthetics, akhathaleli nje ngokukwakha izicubu ezixubileyo kunye nokunciphisa inani leentlawulo zeoli. I-Guggulsterones yomzimba, Unokulinganisela iiplani ze-240 kwaye ube nenani elikhulu lophuhliso lwe-muscular kodwa ukuba uneesentimitha ezimbini zamathambo angaphantsi komzimba wakho awuyi kujonga konke okusemandleni. Ngokuqinisekileyo akuyi kuba mnandi kwaye abanye abantu banokukubiza ngokuba nguDoughboy. Ewe, ukuba nantoni na efana nomthi weGuggul awuyi kufuna ukubizwa ngamagama ukuze usebenze kanzima ekujongeni okusemandleni akho. Ngethamsanqa, kwimeko yokulahlekelwa kweoli, uGuggul uyayiqonda ingxaki yakho kwaye ulungile apho ukukunceda ufezekise iinjongo zakho (guggulsterones bodybuilding).
Xa i-thyroid gland ivuselela, ivelisa i-hormone ye -roid efana ne-thyroxin. Ezi ihomoni ze-thyroid zinefuthe elinzulu kwisantya se-metabolism kubandakanye umphumo ochanekileyo kwi-adipose tissue. Ngokwenene, oku kuthetha ukuba i-Guggulsterones iya kuvuselela i-thyroid yakho ukuba ivelise amahomoni amaningi e-thyroid okuza kuphakamisa izinga lakho lokunciphisa umzimba kwaye utshise amaninzi! I-Guggulsterones ngokwabo iboniswe ukuba isebenze kakuhle kakhulu ngenxa yokulahlekelwa yintsifo kodwa ndifumene inhlanganisela engeyona nto emfutshane yeGuggulsterones kunye ne-ECA yokubanjwa njenge-Adipokinetix. Siye sazi ukuba i-Adipokinetix yinto enamandla kakhulu yokutshisa ioli kodwa yenza umsebenzi wayo ngaphandle kwe-thyroid.
Kwaye kunengqiqo kum ukuba ukuba inokudibanisa i-hormones ye-thyroid nefuthe le-fatrogen (i-adrenaline). Kwakhona, unomdla kukuba i-ECA uhlobo lwesitampu iyancipha ukunciphisa inani le-hormone ye-thyroid ejikelezayo egazini ngokuhamba kwexesha. I-Guggulsterones yenza umsebenzi omkhulu wokuvimbela ukunciphisa, ngaloo ndlela igcina zonke iinkqubo zokutshisa i-fat fat operating systems.
Izindlela zokugqibela eziza kunceda i-Guggulsterones ekuloleni ukutshisa ioli kunokutya kweetogenic nokusetyenziswa kwe-hormone yokukhula. Ngokudlulayo kwexesha, iidloji ze-ketogenic zivame ukunciphisa ukusebenza kwe-thyroid ngokunciphisa ukuguqulwa kwe-T4 ukuya kwi-T3 enamandla. Kwakhona, apho i-Guggulsterones ithathwa imihla ngemihla kwiinyanga ze-3, zavelisa ukunciphisa ukunyuka kwezilonda kwiininzi zezigulane. Nge-tetracycline, ukunciphisa ipesenti kwizilonda ezivuthayo kwakuyi-65.2% xa kuthelekiswa ne-68% kunye ne-Guggulsterones. Njengoko uyakubona, umhlobo wethu uGuggul unamandla kakhulu ekulwa nemphambo (guggulsterones acne)
8. I-Guggulsterones (guggul) isiphumo kwi-thyroid kunye nehomoni
I-Guggulsterones (guggul) yinkomfa ekhethekileyo eye yafundiswa ngemiphumo yayo enokuthi ifuthe i-fat-effects for years. * Ngokungafani namanye amaninzi amaninzi, asebenza ekuphakanyiseni izinga lentliziyo okanye ekuphuculeni umgangatho wesimo somzimba wamathambo athile kunye noshukela, i-guggul ukukhupha (kunye nesithako sayo esisebenzayo, i-guggulsterones) kuthiwa inefuthe kwi-thyroid kunye ne-hormone yokuvelisa ehambelana nometabolism (guggulsterones thyroid).
Yintoni abantu abanomdla kule Guggulsterones (guggul) yinto enokwenzeka njengendlela yokulahlekelwa kwesisindo, okwenza i-thyroid ukudala ibhalansi kwi-hormone triiodothyronine (T3) kunye ne-thyroxine (T4) elawula i-metabolism (guggulsterones thyroid). Kwisifundo esithile esicatshulwe ngokuqhelekileyo esiqhutywe kwiYunivesithi yakwaDevi Ahilya e-India, abaphandi baphawule ukwanda kweengxelo ze-T3 kwizifundo zezilwanyana ezazinikwa i-extract of the guggul plant, ngelixa T4 amanqanaba ahlala engatshintshiyo. Oku kuphakamisa ukuba ukusetyenziswa komntu kwezi zinto kunokuvelisa iziphumo ezintle ngokubambisana nokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca, ngakumbi kubantu abaneengxaki zokungalingani kwe-thyroid ezifana ne-hypothyroidism. Ulingo lomntu oluqhutyelwa kwi-1995 kunye ne-58 ngokweqile abantu babonakala baqinisekisa ezi ziphumo, kunye nokulahlekelwa kwesisindo samapounds e-4.95 abonwa ngabantu ngabanye abalawulwayo kwimihla yeentsuku ze-30 xa kuthelekiswa neqela lokulawula6.
Okubaluleke ngakumbi, le miphumo ingafumaneka ngaphandle kokuvuselelwa kwenkqubo ye-nervous central, njengoko i-guggulsterones yenza ngokuthe ngqo kwi-thyroid. * Oku kubaluleke kakhulu kubantu abanokubandezeleka kweemeko zentliziyo kwanoma yimuphi uhlobo, okanye abantu abanokufuna uncedo olongezelelweyo ekunciphiseni ubunzima ngaphandle kwezinto ezingathandekiyo kunye nokuphazamiseka okungahambi rhoqo kunye nokusetyenziswa kwamaninzi e-CNS.
Umlinganiselo osemgangathweni we-guggul / guggul dosage (i-extract plant) ngu-400-500mg ithathwa kathathu ngosuku ngokutya, i-1,200-1,500mg yemihla ngemihla (nangona i-2,000mg isetyenziswe ngaphambili) xa usebenzisa i-guggulsterones umthamo wodwa, i-dose ye-25mg kuthathwa kathathu ngosuku kunye nokutya.
Ngamanye amaxesha 'igum guggul' isetyenziswe kwii-2-4.5g ngosuku (iyonke), kanti nangona ingaqinisekanga ukuba i-guggul idinga ukutshatyalaliswa kunye nokutya iyakuthi ikhuthazwe ngaphandle kokuqaphela.
10. I-Guggulsterones (guggul) isilumkiso
-Ukubhala kunye nokuncelisa
I-Guggul iFUNA UKUBHALWA NGOKUBHALWA ngexesha lokukhulelwa. Kubonakala kukukhuthaza ukuhamba kwamanyathelo kwaye kuvuselela isisu, ngoko abanye abaphandi banenkxalabo yokuba ingaba yingozi yokukhulelwa. Ayanele ngokwaziyo malunga nokukhuselwa kokusebenzisa i-guggul ngexesha lokuncelisa. Ungasebenzisi guggul ukuba ukhulelwe okanye uncelise.
I-Guggul inganciphisa i-blood clotting kwaye ingabangela ukuphuma okanye ukutyumla kubantu abanokuphazamiseka kwegazi.
-Iimeko ezinokukhathazeka ezifana nomhlaza wesifuba, umdlavuza we-uterine, umdlavuza we-ovarian, endometriosis, okanye i-uterine fibroids
I-Guggul ingenza njenge-estrogen emzimbeni. Ukuba unayo nayiphi na imeko enokuthi yenziwe ibe yimbi ngakumbi xa usondele kwi-estrogen, ungasebenzisi guggul.
- I-thyroid okanye i-thyroid engasebenzi (hypothyroidism okanye hyperthyroidism)
I-Guggul inokuphazamisa unyango kule miqathango. Ukuba unesimo se -roid, musa ukusebenzisa i-guggul ngaphandle kwe-supervision yakho.
I-Guggul inokunyusa umngcipheko wokuphuma kwegazi ngexesha nangemva kokuhlinzwa. Yeka ukusebenzisa i-guggul ubuncinane kwiiveki ze-2 ngaphambi kokuhlinzwa okucwangcisiweyo.
Iipilisi zokulawula i-Bhar (iziyobisi zokukhusela) zidibanisa ne-GUGGUL
Ezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa ziqukethe i-estrogen. I-Guggul inokuthi ikhulise imiphumo emibi yeepilisi zolawulo lokuzalwa. Ezinye iipilisi zokulawula ukuzalwa ziquka i-ethinyl estradiol kunye ne-levonorgestrel (Triphasil), i-ethinyl estradiol kunye ne-norethindrone (i-Ortho-Novum 1 / 35, i-Ortho-Novum 7 / 7 / 7) kunye nabanye.
Imedication ishintshile ngesibindi (i-Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) i-substrates) idibana neGUGGUL
Amanye amayeza aguqulwa kwaye aphulwe phantsi kwesibindi.Guggul inokunyusa ukuba isibindi siphula njani ngokukhawuleza amanye amayeza. Ukuthatha i-guggul kunye neminye imichiza ephukile phantsi kwesibindi kunokunciphisa ukusebenza kwamanye amayeza. Ngaphambi kokuba uthathe intetho yeguggul kumniki-nkonzo wakho wezempilo ukuba uthatha nawaphi na amayeza aguqulwa ngesibindi. <br/> <br/> Ezinye iimichiza ezitshintshile ngesibindi ziquka i-lovastatin (i-Mevacor), i-atorvastatin (i-Lipitor), i-ketoconazole (i-Nizoral) , itraconazole (Sporanox), i-fexofenadine (Allegra), i-triazolam (i-Halcion), kunye nabanye abaninzi.
-Ipropranolol (Inderal) idibana neGUGGUL
I-Guggul inokunciphisa ubuninzi bepropranolol (Inderal) umzimba uthatha. Ukuthatha i-guggul kunye nepropranolol (Inderal) kunokunciphisa ukusebenza kwepropranolol (Inderal).
-Tamoxifen (Nolvadex) idibana neGUGGUL
Ezinye iintlobo zomhlaza zichaphazeleka ngamahomoni emzimbeni. Iiseli ezinobucukubhede obuthathwa yi-estrogen zizifo ezinomhlaza ezichaphazeleka ngamanqanaba e-estrogen emzimbeni. (Nolvadex) isetyenziselwa ukunceda ukunyanga kunye nokukhusela ezi ntlobo zomhlaza. IGuggul inokuchaphazela ngokwamanqanaba amanqanaba e-estrogen emzimbeni. Ngokuchaphazela i-estrogen emzimbeni, i-guggul inokunciphisa ukusebenza kwe-tamoxifen (Nolvadex). Sukuthatha i-guggul ukuba uthatha i-tamoxifen (Nolvadex).
12. Ngaba ukhuselekile ukusebenzisa iyeza le-Ayurvedic (Guggulsterones)
Umkhuba wasendulo wamayeza ase-Ayurvedic (Guggulsterones) uye wabancedisa ngokucacileyo izigidi zabantu zidala ubomi obuphilileyo. Nangona kunjalo, njengawo nawuphi na olunye uhlobo lwezonyango, iindlela zonyango ze-Ayurvedic zineenkcaso kunye nokuba nemiphumo emibi okanye kwimiphumo emibi.
Abanamalungu abaninzi base-Ayurvedic bathi i-longevity's longevity incarnation inikezela ingxabano enamandla yokuphumelela kwayo kunye nokukhuseleko. Nangona kunjalo, ininzi yolwazi malunga nokuphumelela kwe-Ayurveda idluliselwe ukusuka kwititshala ukuya kubafundi. Ukongeza kule "ngembali yomlomo," iincwadi zamandulo uCharak Samhita kunye neSushruta Samhita ziqukethe imibhalo ecwangcisiweyo malunga nokusebenza kwenkqubo.
Nangona kungekho nkulu iqela lophando lweklinikhi kwi-Ayurveda, ezininzi iinkqubo kunye nemigangatho yeenkqubo ziyabonwa kwaye zisetyenziswe kwizicwangciso zonyango eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, umqeshi we-Ayurvedic wempembelelo yengqondo neyomzimba abantu ababa nakho ngexesha lokutshintshwa kwexesha lonyaka liveliswa kuphando kwi-SAD (i-disad disorder disorder).
Kukho nezokwelapha kunye nokwazisa ukuvuma izibonelelo zezempilo zezenzo ze-Ayurvedic, ezifana ne-yoga, ukuhlaziya kunye nokucamngca. Amayeza asetyenziswa kwiyeza ze-Ayurvedic, ezifana ne-tumeric, i-ginger, kunye ne-neem, ngoku ziyabonwa njengenzuzo kwintliziyo yempilo kunye ne-antioxidant-boosters. Jonga iiNgxelo zokuFunda kunye nokuFunda okuqhubekayo ngenzansi malunga nemizekelo yophando lwezophando oluqala ukuvela kwiimveliso ezithile ze-Ayurvedic.
Ulwazi lweNtshona lweyeza le-Ayurvedic (Guggulsterones) lisasemncinci, ngoko kukho ukukholelwa. Njengoko ukusetyenziswa kweyeza ze-Ayurvedic kukhula, kwaye njengabagqirha abanzi babelana ngolwazi lwabo nabanye ababoneleli ngezempilo, le nto i-Ayurveda ikwazi ukuguqulwa ibe yixabiso kunye nolwazi lwenkqubo.
I-resin ephuzi ekhishwe kwisityalo se-guggul iqukethe izinto ezibizwa ngokuba yi-guggulsterones kunye nabanye. Izifundo zeLebhu zifumene ukuba i-guggulsterones inokutshintsha i-metabolism ye-cholesterol ngesibindi. I-Guggulsterones inokunyusa nokuveliswa kwemimoya ye-thyroid kwaye ixhaphake ngokuqhelekileyo ekuveliseni ukulahlekelwa kwesisindo. Iimveliso eziqulethe izicatshulwa zeguggul kufuneka zithathwe ngokuqaphela ngenxa yobungozi bemiphumo emibi.
-Interaction with Disease
Abo baphathwa ngeengxaki ze-thyroid, kuquka i-hypo-and hyperthyroidism, kufuneka badibane nodokotela wabo ngaphambi kokuba bathathe i-guggul extract. Abantu abanesibindi okanye isifo sesifo abanakho ukugubungula i-guggul ngokuqhelekileyo kwaye akufanele bathathe. Ngokubanzi, qhagamshelana nogqirha wakho ukuba unqume ukuba i-guggul extract ikhuselekile kuwe.
I-Guggul extract akufanele ithathwe kunye ne-warfarin, i-aspirin, iziyobisi ezichasene nezidakamizwa okanye ezinye iziyobisi ezivimbela igazi. I-Guggul extract inokunyusa umngcipheko wokulapha okunzima okanye okungalawulwayo xa kuthathwa ngamachiza. I-Guggul extract ingadibanisa kunye ne-hormone ye-thyroid okanye ezinye iimyeza ezisetyenziselwa unyango lweengxaki ze-thyroid. Ukuthatyathwa ndawonye, ​​imithi ye-guggul kunye ne-thyroid ingakhupha ingozi yesifo se-thyroid, imeko enokubangela ukuba ubomi bungozi apho kukho i-hormone ye-thyroid enkulu. I-Guggul extract inganciphisa kakhulu ukusetyenziswa kweziyobisi zepropranolol okanye diltiazem.
-Ominye Imiphumo engasenokwenzeka
Ulwazi oluncinci lwesayensi lukhoyo kwi-toxicity ye-guggul extract. Ayaziwa ukuba i-guggul ikhuselekile ngexesha lokukhulelwa, kodwa ngenxa yeziphumo kwi-hormone ye-thyroid kunye ne-lipid metabolism kufuneka ukuba igwenywe. I-Guggul extract ingabangela intloko, isisongqa, ukuphazamiseka kwamathumbu kunye nokugqithisa. Ukuphendula kwe-allergen ukuya kwi-guggul extract kuye kwabikwa.
14. Guggulsterones (guggul)
I-Guggulsterones (guggul) yimizimba ye-bioactive (alkaloids) efumaneka kwiComiphora Mukul. I-Guggul isetyenzisiwe kwiyeza lase-Indian Ayurvedic ngaphezu kwe-2,000 iminyaka ngenxa yezifo ezahlukahlukeneyo kwaye sele isandul 'ukugqithiswa kwipilisi yaseNtshona kunokwenzeka ukuba i-cholesterol isinciphisa, i-dermatalogical, i-anti-inflammatory, anti-arthritic kunye ne-anti-obesity benefits.
tags: ukuthenga i-Guggulsterones powder, Guggulsterones powder
Izinto ze-9 malunga ne-Entecavir hydrate	Indlela yokuthenga i-Nifuratel Drug (4936-47-4) inyathelo ngeNyathelo kwi-Intanethi